Su'aalaha La Weydiiyo - Raymin Display Products Co., Ltd.
Maxaan sameynaa si aan u wada shaqeyno?
Maaddaama inta badan waraaqdayada 'FSDU' iyo sanduuqa hadiyadda adag ay yihiin kuwo si gaar ah loo sameeyay, badiyaa waxaan ka bilownaa qaabeynta qaabeynta iyo cabbirka macaamiisha. Marxaladdan, waxaan u baahanahay macluumaad ku saabsan faahfaahinta alaabtaada (cabbirka, culeyska, sida loo soo bandhigo) ama noo soo dir dhowr shaybaar shey oo tixraac naqshadeynta ah
Ma bixin kartaa muunad?
Haa, muunad cad ama muunad midab ah oo lagu daabaco daabacaadda-jet. Waxaan u sameyneynaa qaabeyn marka hore macaamilka si loo xaqiijiyo, ka dibna aan u soo bandhigno muunad tijaabin ah oo cad si aan u hubino cabirka, tayada warqadda, awoodda miisaanka taageerta. Kadib marka qaabdhismeedka la xaqiijiyo, waxaan macmiil siin doonaa khad dhimanaya oo farshaxan sameeya. Badanaa, waa macaamilka abuuraya farshaxanka bandhigga ama sanduuqa wax lagu rido, haddii macaamilku dhib ku qabo ama uusan lahayn nashqadeeye tan, waan ka caawin karnaa illaa inta ay noo soo bandhigayaan farshaxan aasaasi ah. Marka xigta waa in la sameeyo muunad midab ah ka hor inta aan la soo saarin tiro, si loo hubiyo waxa farshaxanku ka kooban yahay si sax ah loogu dhejiyo sanduuqa muuqaalka jiingadda iyo sanduuqa tayada sare leh.
Waa maxay waqtiga hogaaminta muunadu?
Waa 1-2 maalmood tusaalaha cad iyo 3-4 maalmood tijaabada midabka.
Miyaan isticmaali karaa khad-jet muunad muujisa warqad daabacan ama baakado waraaqo tayo leh si aan u hubino midabka wax soo saar ballaaran?
Maya, maxaa yeelay waxay gebi ahaanba ka duwan tahay daabacaadda xabagta ee wax soo saarka ballaaran, sidaa darteed midabku aad ayuu uga duwanaan doonaa midabada wax soo saar ballaaran. Haddii aad rabto inaad aragto sida midabku u ekaan doono wax soo saarka baaxadda leh, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa macmiil A3 ama caddeyn cabbir A4 ah oo 95% u dhow midabka wax soo saar ballaaran.
Miyaan u baahanahay inaan lacag ka bixino shaybaarka?
Haa. Badiyaa waa 50 $ muunad cad iyo 100 $ muunad midab leh, laakiin tan waxaa laga goyn karaa wadarta qiimaha dalabka marka amarka la xaqiijiyo,.
Sideed u rartaa muunadda?
Waxaan badanaa ku rarnaa macaamiisha DHL, UPS, FedEx ama xisaabta TNT. Haddii aadan haysan koontada boostada, waxaan kuu diyaarin karnaa adeegsi annagoo adeegsanayna adeeggayaga wakiilka oo kharashkiisu aad uga hooseeyo kan rasmiga ah, waxaadna na siisaa lacag dusha, taas oo aan ku soo celin doonno wakiilka. Qaabkani aad ayuu uga hooseeyaa laakiin in yar ayaa ka dheer helitaanka qaybta.
Waa maxay waqtiga hoggaaminta amarka badan?
Waa 12-15 maalmood labadaba bandhigga PDQ iyo sanduuqa waraaqaha tayada leh ee waxsoosaarka ballaaran.
Ma bixisaa adeeg isku duubnaan ah oo lagu soo bandhigayo?
Haa, waan qabannaa. Macaamiilku wuxuu noo soo diraa badeecadooda, waxaan kaa caawinaa inaan si wanaagsan isugu soo bandhigno bandhigyadooda 'POS', alaabta saarno oo aan buuxino sanduuqyada meelaha bannaan haddii loo baahdo. Ugu dambeyntiina Waxaan leenahay kartoonno bannaanka ka baxsan oo adag iyo V-looxyo ay ka buuxaan muuqaalka oo dhan. Dabcan adeeggan wax yar ayaan ka qaadi doonnaa.
Haddii macmiilku dhib kala kulmo inuu soo uruuriyo muuqaalka jiingada, sideed u caawin kartaa?
Waxaan sida caadiga ah tixgelineynaa inaan qaabeyno qaababka muuqaalka POP iyadoo si fudud la isugu soo uruuriyay, waxaanna ku siinnaa warqad gacanta ku jirta sanduuq kasta oo baako lagu rido. Haddii macaamilku uusan wali wax fikrad ah ka heysan sida loo shiro, waxaan qaadaneynaa fiidiyow gaaban oo aan ku tusinno sida tallaabo tallaabo loo sameeyo